Xildhibaan ku jira Baarlamaanka Kenya oo si gabasho la’aan u cadeeyay Danaha Kenya ee Kismaayo (Akhriso warbixin muhiim ah). | Salaan Media
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Kenya ayaa waxa uu daboolka ka qaaday in Dowladda Kenya ay dano gaar u joogto Magaallada Kismaayo, isagoona weeraray Siyaasadda Madaxweyne Xassan Sheikh.
Xildhibaanka ayaa waxa uu ka shanqariyay in Ciiddamadda Dowladda Kenya aysan Kismaayo u joogin Sugida Ammaanka balse uu u jeedkoodu yahay inay gurtaan Kheyraadka Magaallada Kismaayo ay la ciir-ciireyso.
Xildhibaanka oo Magaciisa lagu sheegay Xildhibaan Aadan Barre Ducaale, ayaa waxa uu yiri isaga oo ka hadlaayay Arrinta Ciiddamadda Kenya ee Kismaayo ‘’Madaxweeyne Xassan Shiikh Maxamuud waan u sheegnay , ciidamada Kenyana kama soo baxayaan Kismaanyo, maxaa loo sheeg sheegayaa Ciidamada Kenya oo aan loo soo hadal qaadaynin ciidamada Yugaandha iyo Burundi, Dawlada Itoobiya waxay sar sar u tahay Somaliland iyo Puntland’’ Sidaa waxaa yiri Xildhibaanka.
Geesta kale, waxa uu Xildhibaanku Sheegay in Madaxweynaha Somalia uu isagu qalinka ku duugay inay Ciiddamadda Kenya sii joogan Kismaayo, balse ay qeyb ka ahayd heshiskii lagu galay Magaallada Nairobe ee Xarunta Dalka Kenya.
Xildhibaanka ayaa waxa uu si cabsi la’aan ah uu Fashilay in Dowladda Somalia ay sahlatay Danaha ay Dowladda Kenya ka leedahay Somalia Gaar ahaan Jubbooyinka waxa uuna sheegay in Ciiddamadda Kenya aysan Kismaayo u joogin wax Nabad sugid ah, balse ay u joogan Dano Siyaasadeed ee salka ku heysa Kheyraadka Kismaayo.
Waxa uu sidoo kale, Xildhibaanka yiri ‘’ Dowladda Kenya si maalayacni ah kuma haligeyso Ciiddamaddeeda waxaa loo bahan yahay inay fahanto Somalia, waana ka dhabeyn doono Siyaasadda Kenya kaga aadan gurashadda Kheyraadka Kismaayo ku dayacan’’ sidaa waxaa yiri Xildhibaanka.
Si kastaba ha ahaatee, Xildhibaan Aadan Barre Ducaale, waxa uu si cad u fashiliyay Siyaasado kale oo ay Dowladda Kenya ka leedahay Kismaayo oo ay koow ka tahay hakinta Maamulka Kimaayo looga dhawaaqi doono, Dhaqaalaha, Kheyraadka iyo dano kale oo aan halkaani lagu soo koobi Karin.